काठमाडौँ - थाकखोलाबाट झरेका थकाली प्राय आफ्नो परम्परागत पेशामा नै रमाउन चाहन्छन् । चिटिक्क परेका घर तथा साँस्कृतिक विविधता उनीहरुको परिचय हो ।
सामूहिक भावनाका कारण उनीहरुले विगत लामो समयदेखि ढुुकटी खेले र आर्थिक रुपमा सबैलाई सबल बनाउने लक्ष्यसमेत राखे । केहीले यसलाई अवैध पनि माने । ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासमा त्यसले महत्वपूर्ण योगदान दियो ।
एकाधबाहेक धेरै जसो थकाली सम्पन्न छन्, आर्थिक रुपमा । लाहुरे हुने र होटल व्यवसाय गर्न छाडेर अन्य पेशामा रमाउन खोज्ने थकाली कमै भेटिन्छन् । ती मध्येका एक हुनुहुन्छ, अशोक शेरचन ।
लाहुरे हुने मोह त्याग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख हुने मेसो मिलेको हो, उहाँलाई । विसं २०२९ सालमा धौलागिरिको फेदमुनि बाग्लुङमा जन्मनु भएका शेरचनलाई शङ्करदेव क्याम्पसमा पढ्न आउनु नै सफलताको पहिलो खुट्किलो बन्न पुग्यो –‘नस्टाल्जिक’ हुँदै शेरचनले सुनाए ।
बागलुङ बजार आफैँमा राम्रो र सुन्दर परिचय बोकेको स्थानका रुपमा परिचित छ । उत्तरतिर देखिने धौलागिरि, अन्नपूर्ण र माछापुच्छे«को छायाँले पनि धेरैलाई सफल बन्न प्रेरित गरिरहेको छ । शंकरदेवमा व्यवस्थापन विषय पढ्न बागलुङबाट काठमाडौँ हान्निएको ठिटो आज प्रभु बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनेको छ । “के यो सफलता होइन र ? मेरा लागि शेरचनले विगत सम्झनुभयो ।
राष्ट्र बैंकका उच्च तहका कर्मचारी थिए, गोविन्दबहादुर थापा । नाताले अशोकको सानी आमाका बुढा (सानाबा) । कालीगण्डकी तरेर काठमाडौँ झरेको युवालाई बैंकर बन्न सुझाउने र प्रेरणा दिने उनै थापा हुनुहुन्थ्यो । साथीभाइले पनि सुनाए, नेपाल बंगलादेश बैंकमा जागिर खुलेको छ । खाने कि नखाने एउटा प्रश्न भने मनमा द्विविधाको रुपमा उभिएको थियो । तलब थियो, मात्र रु चार हजार ३०० । यो कुरा सन् १९९५ को हो । परीक्षाका सबै चरण पूरा गरेर म बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हो ।
नरेन्द्र भट्टराईले तातेताते गराएर बैंकका ल्याएको अशोक यतिखेर सक्षम र सवल बैंकरको रुपमा स्थापित हुनुहुन्छ । “मेरो जागिथर खाने कुरा त थिएन, तर अकस्मात बैंकको जागिर भइयो ।
विदेश गएको भए राम्रै कमाइ हुन्थ्यो होला भन्ने शुरु शुरुमा त लाग्थ्यो । किनकी सेवा सुविधाका हिसाबले आकर्षक क्षेत्र थिएन त्यतिखेर”, शेरचनले सुनाउनुभयो ।
प्रभु फाइनान्सबाट शुरु भएको वित्तीय क्षेत्रको व्यवसाय यतिबेला प्रभु बैंकमा परिणत भएको छ । त्यसका पछाडि मेहनत, प्रतिबद्धता अनि लगनशीलताले काम गरेको छ । कुनै बेलाको सबल र सक्षम संस्थाको रुपमा चिनिएको ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक किष्ट बैंक समस्यामा प¥यो । सम्हाल्न प्रभु समूह नै आइपुग्यो ।
निजी क्षेत्रको अग्रणी बैंकको रुपमा स्थापित प्रभु बैंकले डोल्पा, हुम्लालगायत कर्णालीमा समेत शाखा विस्तार गरेर राज्यको आँखाभन्दा पर परेका दूर्गम बस्तीलाई राजधानीसँग जोडेको मिठो सफलताको कथासमेत उहाँले सुनाउनुभयो । “सबै काम राज्यले मात्रै गर्छ भनेर सोच्नु पनि भएन नी, हामीले पनि केही न केही योगदान त गर्नैपर्छ”, शेरचनले भन्नुभयो, “एकले थुकी सुकी, सयले थुकी नदी भन्ने त हाम्रो लोकोक्ति नै छ नी !”
समस्यामा परेका संस्था स्याहार्दा शुरु शुरुमा त धेरै समस्या भोग्नुपरेको सुनाउनुहुन्छ, शेरचन । खराब कर्जाको मात्रा बढी हुँदा राष्ट्र बैंकले पनि प्रश्न गर्ने अवस्था थियो । दुःखले सुख दिन्छ भने जस्तै भयो, प्रभु बैंकलाई । जोखिमको भूमरीमा फसेका किष्ट र ग्राण्डलाई जोगाएर ती बैंकका लगानीकर्तालाई हामीले ठूलो आड भरोसा दियौ भन्न पाउँदा गौरवको महसुस नै हुन्छ, शेरचन विगतमा फर्किनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “ठूला समस्यामा परेका वाणिज्य बैंक गाभेर ठूलो जोखिम उठाएका थियौँ । शुरुआती चरणमा त हामीलाई निकै गाह्रो भयो, खराब कर्जाको मात्रा निकै उच्च थियो । व्यवसायको सम्भावना पनि असाध्यै कम थियो ।”
“सबल संस्था बनाउने यात्रामा निस्केपछि हामी केही न केही त गरिहाल्छौँ नि !”, शेरचनले भन्नुभयो, “धेरैसँग छलफल चलिरहेको छ । निर्णय आउन समय त लाग्ला तर हामी छिट्टै अर्को एक वाणिज्य बैंक गाभ्ने प्रक्रियामा छौँ ।” पछिल्ला दिनमा बजारमा प्रभु बैंकले नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक गाभ्ने विषयले चर्चा पाएको छ । धेरै चरणमा दुई संस्थाबीच छलफल पनि भइसकेको छ । प्रभु बैंकको रणनीति के छ भने आफूभन्दा बलियो संस्थासँग गाभिएर आफ्नो पहिचान मेटाउने पक्षमा छैन । उसले प्राप्तिको लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेको छ ।
वित्तीय कारोबार गर्न अरु धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था छन् । हाम्रो स्वभाविक प्रश्न थियो । “एउटा नेपाली नागरिक अरु बैंक छाडेर किन प्रभु बैंकमा आउने ?” यो प्रश्न सोध्दा शेरचनको मुहारमा एक प्रकारको सकारात्मक आशा देखियो । उहाँले आफ्नो बैंकको उपस्थिति उपल्लो मुस्ताङ, शे–फोक्सुन्डो, हुम्लाको खार्पुनाथमा समेत रहेको सुनाउनुभयो । उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “हामी शहरमा मात्रै होइनौँ, ग्रामीण जो राज्यको आँखामा नपरेका स्थानमा समेत पुगेका छौँ । ग्राहक बैंकमा होइन, बैंक ग्राहकमा जानुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले काम गरेका छौँ ।” बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एकै प्रकारका सुविधा उपलब्ध हुने भए पनि विप्रेषण भित्र्याउनेतर्फ अग्रणी संस्थाको रुपमा प्रभु नै रहेको छ ।
त्यसकारणले पनि आज हरेकको मन मतिस्कमा प्रभु बैंक ‘प्रभु’ बनेर स्थापित भएको छ । सङ्ख्यात्मक रुपमा पनि १२ लाख बढी ग्राहक भएको बैंक हो, प्रभु । सङ्ख्याले पनि ठूलो भूमिका खेल्छ व्यवसायमा । एक अर्कामा कारोबार गर्न पनि राम्रो र सजिलो बनाइदिन्छ । प्रभुमा गएपछि अन्यत्र जानै पर्दैन भन्ने मान्यता स्थापित छ । नेपालका सबै भागलाई बैंकिङ सेवा तथा सुविधासँग जोडिएको छ । सहज रुपमा आफ्ना आफन्तले पठाएको पैसा आफ्नै गाउँघरमा पाउँदा को खुसी नहोला र ? शेरचनले भन्नुभयो, “हजारौँ माइल टाढा रहेका आफ्ना आफन्तले पठाएको पैसा आउँदा दूरदराजका बासिन्दाको मुहारमा देखिने खुसीको मूल्य कति हुन्छ ? कुनै गणितले पत्ता लगाउन सक्ला र ?”
कुराकानीको क्रममा हामीले सोध्यौँ प्रभु नाम कसरी राखियो ? शेरचन केही समय मुस्कुराउनुभयो । प्रभु समूहका अध्यक्ष हुनुहुन्छ देवीप्रकाश भट्टचन, ओशोका अनुयायी । ओशोले आफ्ना सबै अनुयायीलाई अर्कै नाम दिनुहुन्थ्यो । पोल्ट्री व्यवसायमा नाम कमाएका गुणचन्द्र विष्टलाई ओशोले स्वामी कृष्ण भारतीको नाम दिनुभएको थियो । देवीप्रकाशलाई ओशोले दिनुभएको नाम थियो प्रभु शरणम् । देवी नाम भएकाले पनि त्यस्तो उपनाम दिएको आफूलाई अध्यक्षले सुनाउनुभएको शेरचनले बताउनुयो ।
शेरचनको कार्यकाल अब तीन वर्ष बाँकी छ । बैंकले अन्य संस्थालाई प्राप्ति तथा गाभेको अवस्थामा थप केही समय उहाँले बैंकको नेतृत्व सम्हाल्ने मौका पाउनुहुन्छ ।
बैंकको जागिर सकिएपछि के गर्ने सोचमा हुनुहोला, शेरचन । आम मानिसको मनमा एक प्रकारको जिज्ञासा स्वभाविक छ । हामीले पनि उहाँलाई सोध्यौँ, आगामी दिनमा के गर्नुहुन्छ ? उहाँले एकदैम सहज उत्तर दिनुभयो, “अब म राजनीतिमा जाने सोचमा छु ।”